Umkhathi Wokumaketha Komphakathi we-B2B | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septhemba 28, 2012 Douglas Karr
I-B2B Yokumaketha Komphakathi idinga ukusungulwa kobukhona negunya elikhulayo embonini yakho. Izinkampani ze-B2B ezisebenzisa isu elinolaka lokwakha ubukhona bazo kwi-inthanethi kuzo zonke izindlela zokuxhumana nabantu zamukelwa njengabaholi abacabangayo futhi ukulandela kwabo kuletha ibhizinisi. Angivamile ukubona inkampani ye-B2B iqhuma ekukhuleni ngaphandle kokuba nesu lokumaketha umphakathi lisendaweni. Futhi ngibonile amabhizinisi amaningi e-B2B elwa kanzima ngoba engenawo.
Amabhizinisi aqonda ukubaluleka kokungeza izinto zomphakathi emikhankasweni yawo yezokumaketha anika amandla amakhasimende namathemba okwabelana ngamanethiwekhi awo ngenkathi kwakhiwa ukwazisa ngomkhiqizo. Leli gama lokuthumelelana imiyalezo lontanga lithembeke kakhulu futhi lisebenza kakhulu ekukhuliseni umthelela wemikhankaso yakho.
Ku-infographic yabo, i- Umkhakha Wokumaketha Komphakathi we-B2B, UMarketo uhlola izinto zomkhankaso we-B2B wokumaketha ophumelelayo.
Tags: b2bisizukulwane esihola phambili se-b2bukumaketha kwe-b2bInethiwekhi ye-b2bukuthengiswa kwe-b2bb2b beshaya
Ukuthengiswa kwe-Flash Ukuba Izilinganiso Ezilinganayo ze-Outlet Stores